လူမှုရေး | News and Periodical Enterprise
၂၀၂၂ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့
Submitted by npe-user on Wed, 05/18/2022 - 13:08
ဒေါက်တာအေးအေးသင်း၊ အမျိုးသားပြတိုက် (နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များကောင်စီ (International Council Of Museums)ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ ပြတိုက်များ တစုတစည်းတည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၇၅ နှစ်မြောက် စိန်ရတုပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Read more about ၂၀၂၂ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့
Submitted by npe-user on Wed, 05/18/2022 - 12:54
ဤဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကုလသမဂ္ဂအကြောင်းကို ယခုထက် ပိုမိုသိစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Read more about မြန်မာများ သိသင့်သော ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်လေးချက်
ပန်းအိပ်မက်တို့ကို ရှင်သန်စေသူ စာ‌ရေးဆရာမကြီး မစန္ဒာ
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 14:04
Read more about ပန်းအိပ်မက်တို့ကို ရှင်သန်စေသူ စာ‌ရေးဆရာမကြီး မစန္ဒာ
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 13:44
၁၉၇၇ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များကောင်စီ (International Council of Museum) မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြတိုက်များနေ့ကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ၄၅ ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Read more about အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့
ရေနေသယံဇာတထိန်းသိမ်းရေး အဆိပ်ချ၊ ဆေးချငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ဘက်ထရီရှော့တိုက် ငါးဖမ်းခြင်းမပြုရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေး
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 13:42
မြန်မာ့ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များတွင် တားမြစ်ငါးဖမ်းနည်းဖြစ်သော အဆိပ်ချ၊ ဆေးချငါးဖမ်းခြင်း၊ ဘက်ထရီရှော့တိုက် (ကျင်စက်)ဖြင့် ငါးဖမ်းဆီးသူတချို့ရှိနေကြသဖြင့် ထိုကဲ့သို့ဖမ်းဆီးပါက ရေသယံဇာတများ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။
Read more about ရေနေသယံဇာတထိန်းသိမ်းရေး အဆိပ်ချ၊ ဆေးချငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ဘက်ထရီရှော့တိုက် ငါးဖမ်းခြင်းမပြုရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေး
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 13:37
Read more about ဂေဟစနစ်ဆိုတာ
မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တောက ကြယ်လိပ် များ
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 13:35
Read more about မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တောက ကြယ်လိပ် များ
မိန်းမလှကျွန်းဘေးမဲ့တောမှ ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ ရေရှည်ရှင်သန်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီထိန်းသိမ်းပေး
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 13:30
Read more about မိန်းမလှကျွန်းဘေးမဲ့တောမှ ဧရာဝတီလင်းပိုင်များ ရေရှည်ရှင်သန်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီထိန်းသိမ်းပေး
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 12:59
Read more about အသိပညာသည်သာ လူ့ရဲ့ရတနာ
အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး . . .
Submitted by npe-user on Tue, 05/17/2022 - 12:55
Read more about အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး . . .
Subscribe to လူမှုရေး